Shinoa fitahirizam-bokatra misy ny fitahirizam-bary any Shina miaraka amin'ny orinasa sy ny mpamatsy kofehy vita amin'ny tombo-kase Hoyer
Fitahirizam-bary fitahirizam-bidy amin'ny alàlan'ny fizahana tariby fitotoana
Mitahiry tavoahangin-tsakafo an'habakabaka: boaty fitahirizana Hoyerglass miaraka amin'ny sakafo tsy misy poizina, tsy misy tsirony, BPA 100% maimaim-poana. Ny boaty tsirairay fitaratra dia nofehezina tsara ary nasiana plastika silicone ary mpanamboatra vy vita amin'ny vy tsy miangaly mba hahazoana antoka fa hadio foana, madio, ary azo antoka mandritra ny fitahirizana ny sakafo.
Volume: 2100ml / 75 oz
Haavo: 258mm / 10,16 santimetatra
savaivony: 110mm / 4.3 santimetatra
[Fijery fotsiny izay ao anatiny] noho ny fangarony ny fitaratra, dia ho fantatrareo foana hoe ohatrinona no avela ao anaty siny ary ahoana no fivoarana ny sakafo arovana nefa tsy manokatra ny sarony ambony. Fanampin'izay, ny masontsivana mahita - amin'ny alàlan'ny famolavolana serivisy ambony dia miharihary kokoa ny fahitana ny kabinetra ao an-dakozia.
(Lehibe lafatra) isan-tokantrano tonga lafatra. Ity tavoahangy fitaratra ity dia afaka mitazona karazan-tsakafo marobe, toy ny jam, chutney, lafarinina, voamadinika, siramamy, zava-manitra, voanjo, dite, voanio, ary ny sakafom-pitiavanao tianao indrindra, toy ny mofomamy. Tsara ihany koa mandritra ny fermentation!
(Fanomezana ho tiany / tiany) satria ny lakozia isaky ny fianakaviana dia mila tanki-fitehirizana sakafo, azo antoka fa safidy tsara indrindra amin'ny fanomezana isan-tokantrano sy fanomezana an'ny reny. Ny namana na ny reny dia ho faly amin'ny kalitao azo antoka sy kalitao tsara tarehy.
100% fahafaham-po amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia miantoka ny fahafaham-pon'ny mpanjifanay. Fanamarihana: mora ny manadio rano, fa mampidi-doza ny manadio amin'ny lafaoro microwave.
Vita amin'ny vera borosilicate tsy misy poizina, dia mateza ary afaka mitahiry varimbazaha, lafarinina, vary, siramamy, lafarinina, kofehy, ary voan-kafe. Aza manahy momba ny zavatra manimba manakaiky ny sakafonao. Ny fikotrehana fitotoana vera dia tsy ho orana, fa rivotra mangatsiaka.
Ny cap cap vy stainless vy dia nofehezina tamin'ny silicone mba hialana amin'ny rivotra, ka mamorona tontolo iainana izay ahafahan'ny sakafo hiaina vaovao sy maina mandritra ny fotoana maharitra.
Transparent sy famoronana sehatra
Tsy mila maminavina izay ao anaty siny-boinao satria ny fitaratra mazava dia manamora ny hanaraha-maso sy ahafantarana azy. Azon'izy ireo atambatra ao ihany koa ny hanangonana toerana ho an'ny kabinetra sy ny pantry.
Malaza amin'ny lamaody
Miaraka amin'ny fonony azo antoka sy vatana mazava, ny siny fametrahanadia mifanentana foana amin'ny counter counter ao an-dakozia noho ny bikany tsotra sy kalitao. Mora diovina amin'ny tanana ihany ary tsy miova ny loko ny vera.
Size Boky: 500/750/1000/1500/2100 ml Haavony: 10 / 12.3 / 15/20 / 25.8 cm Diameter: 11 cm Boky: 17,6 / 26.4 / 35.2 / 52.8 / 75 oz Haavony: 4.33 / 4.84 / 5.91 / 7.87 / 10.16 santimetatra Diameter: 4.33 santimetatra
Price Ny vidiny dia natao ho an'ny fanondroananao fotsiny, azo ovaina amin'ny habetsaky ny sainao manokana. Ary raha mila ianao ireo fitaovana mifandraika mifandraika amin'izany dia manontania anay, homenay ny serivisy tsara indrindra aminao.
Previous: Famolavolana diamondra 12 Oz Glass savony Dispenser
Manaraka: Fitahirizan-tsakafo fitahirizan-tsakafo amin'ny alàlan'ny rano eny an-tsokosoko an'habakabaka
siny fitahirizana vera miaraka amin'ny lids
siny siny fitahirizana